Barakacayaal Soomaali ah oo helay guryo cusub - Sabahionline.com
Barakacayaal Soomaali ah oo helay guryo cusub Juunyo 08, 2012
Boqollaal ka mid ah dadka gudaha ku barakacay oo ku sugan Puntland ayaa helay guryo cusub Khamiistii (7-dii June) iyadoo halkaa ay ka dhacday xaflad wareejin ah oo ay samaysay Hay’adda Golaha Qaxootiga Norwey (NRC) iyo Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabbilsan qaxootiyaasha ee UNHCR. Qodobbo la xiriira
Hay’adda qaxootiga QM oo gawaari ugu deeqday Puntland
Kibaki oo si adag ugu baaqay in gargaar bini'aadanimo loo fidiyo goobaha la xoreeyay ee Soomaaliya
Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan Bariga Afrika oo ka batay hal milyan oo qof
Qaramada Midoobay iyo Turki oo ku baaqay in Soomaaliya la gargaaro
Hay’adahaa qaxootiga ayaa 250 guryo joogto ah siiyey bulsho ku dhaqan Waqooyiga Gaalkacyo, taas oo hoy siinaysa ilaa 1,500 oo dad ah oo barakacayaasha gudaha ka mid ah, ayay tiri NRC-du. Saraakiisha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahiba waa ay ka soo qayb-galeen deegaanka Halaboqaad, waxaana halkaa ka dhacay khudbado iyo carruur heesaysa. NRC-da iyo UNHCR-ta ayaa maalgeliyey oo abaabulay dhismaha guryaha. "Waa maalin wanaagsan u goob joogidda qoysaskan oo dhan oo helaya furayaasha guryahooda cusub,” ayuu yiri Xasan Khayre oo ah isudduwaha gobolka ee NRC. “Dadkani waxay barakaceen dhawr jeer, sanado badanna waa ay soo harjadeen. In ay helaan guryo joogto ah waxay u sahlaysaa in ay dib u abaabushaan nolol sharfan.” "Siintooda dhul iyo qoys kasta oo ay siiyeen shahaado lahaansho, dawladda hoose ee Gaalkacyo waxay qaadday tallaabo dheeraada ah oo ay u qaadday dhinaca wada-noolaasho nabdoon,’ ayuu yiri Wakiilka UNHCR ee Soomaaliya Bruno Geddo. Muxuu kula yahay qoraalkan?